3,000 Ethnic Karen Refugees At Risk Of Deportation From Thailand To Burma
The Burma Campaign UK today called on the government of Thailand not to go ahead with forcing around 3,000 ethnic Karen refugees back to Burma. The refugees fled into Thailand in June 2009 followingamilitary offensive by the Burmese Army and their allies, the Democratic Karen Buddhist Army (DKBA), in Karen State, Eastern Burma. […]
February 3, 2010 • By Burma Campaign UK • Tags: Burma Campaign UK, Karen, Refugees • Read more ➤
နအဖစစ်အစိုးရ ကျင်းပပေးမည်ဆိုသည့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲသည် မကျင်းပမီကပင် လွပ်လပ်မှု၊ တရားမျှတမှုမရှိကြောင်းကို မြန်မာနိုင်ငံရှေ့နေများကောင်စီမှ သုံးသပ်ထုပ်ပြန်ချက်
နအဖစစ်အစိုးရ ကျင်းပပေးမည်ဆိုသည့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲသည် မကျင်းပမီကပင် လွပ်လပ်မှု၊ တရားမျှတမှုမရှိကြောင်းကို မြန်မာနိုင်ငံရှေ့နေများကောင်စီမှ သုံးသပ်ထုပ်ပြန်ချက် စာတမ်းတစောင် ထုပ်ပြန်လိုက်ပါသည်။ ထိုထုပ်ပြန်ချက်တွင် အမျိုးသားညီလာခံ၊ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချူပ်ပုံအခြေခံဥပဒေ (မူကြမ်း) နှင့် လူထုဆန္ဒခံယူပွဲတို့အပေါ် မြန်မာနိုင်ငံ ရှေ့နေများကောင်စီ၏ အမြင်သဘေားထား၊ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲနှင့်ဆက်လျဉ်း၍ နအဖစစ်အစိုးရ၏ သဘောထား၊ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေနှင်း စပ်လျဉ်း ၍ နအဖ ဝန်ကြီးချုပ်၏ ပြောကြားချက်၊ လွပ်လပ်၍ တရားမျှတသော ရွေးကောက်ပွဲ တရပ် ကျင်းပနိုင်ရန် လိုအပ်သည့် ဥပဒေအခြေခံလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ နအဖ စစ်အစိုးရနှင့် လက်အောက်ခံ အဖွဲ့အစည်းများ၏ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေမှုများ အစရှိသည့်အချက်များ နှင့် သုံးသက်ချက်များ ကိုဖော်ပြထားပါသည်။ […]
January 15, 2010 • By Burma Lawyers Council • Tags: 2010 Elections, Burma Lawyers Council • Read more ➤
Statement on the 47th Anniversary of Palaung National Revolution Day
# Today is an important day for the Palaung Nation because it marks 47 years of resistance against the dictatorship of the State Peace and Development Council.
# We appreciate and respect all those Palaung civilians, leaders, and comrades who have given their lives and blood for our struggle during the last 47 years.[…]
January 12, 2010 • By Palaung State Liberation Front • Tags: 2008 Constitution, 2010 Elections, Burmese, Palaung, Palaung State Liberation Front • Read more ➤
Collective Statement on 2010 Elections Calling for Genuine Political Reconciliation Before Elections in Burma
We, the united voice of people, communities, and organizations from Burma and around the globe, strongly reaffirm the necessity for genuine political reconciliation before the 2010 elections and call on the international community to take immediate action to ensure viable democratic change occurs in Burma. The people of Burma are entitled to haveagenuine […]
December 10, 2009 • Read more ➤
A group of organizations concerned about the ongoing rapid destruction of Burma’s natural environment has publishedanew report which challenges the direction Burma is taking with regard to national development and argues that alternative resource management systems should be considered.
November 5, 2009 • By Burma Environmental Working Group • Tags: Burma Environmental Working Group, Environment, Livelihood • Read more ➤
November 2, 2009 • Read more ➤